AmaProteas Women azingela ukuqopha umlando
NgoLwesibili, 18 July kuzoba usuku kubantu base-South Africa emhlabeni, hayi ngoba kwi-International Nelson Mandela Day, kodwa ngoba amaMomentum Proteas azobe ebheke uqopha umlando uma ebhekana ne-England kwi-semi-final yokuqala ye-2017 ICC Women’s World Cup e-Bristol. Ukunqoba bebhekene neqembu eliphethe umqhudelwano lizobona abe-South Africa bephumelela ukudlala kwi-final yomqhudelwano okokuqala nqa.
Ebekhuluma nezintatheli namhlanje ntambama, ukapteni uDané van Niekerk ebenokuthemba amathuba eqembu lakhe futhi wakhuluma nokuziqhenya ngokuthi iqembu lifinyelele lapha.
“Sabeka igoli ngaphambi kokuthi sisuke e-South Africa futhi sakhuluma kakhulu ngekhilikithi esiyidlalayo kanye nokudlala lokho kuneqembu esibhekene nalo,” kusho uVan Niekerk. “Kuhlanganiswe eminyakeni emine futhi sizamile ukuhlala eqinisweni kumdlalo wethu kanye nezinhlelo. Sisebenze kakhulu kulokho kuyiwa kwindebe yomhlaba futhi imiphumela iyakuveza lokho. Ngiyaziqhenya ngamantombazane, indlela abaliveze ngayo ibheji.”
Idlale kahle i-South Africa kumqhudelwano, ukunqoba imidlalo emine emidlalweni eyisikhombisa yesixuku. Wawungekho umphumela ngenxa yemvula ngesikhathi bedlala ne-New Zealand futhi bahlulwa emidlalweni emibili; bedlala nabavikela isicoco i-Australia ne-England enkundleni efana nale ezobe iphethe umdlalo wakusasa.
Akabhekile emuva uVan Niekerk kodwa, ubheke ukuqala kabusha okuthembisa ukuthi kuzokhipha umphumela ohlukile eqenjini lakhe uma sekudingeka kakhulu. Uthi ukukholwa kunamandla eqenjini futhi uyajabula ukubona ukuthi iqembu lakhe lizophendula kanjani kwisivivinyo esikhulu.
“Kuningi ukukholwa,” esho eqhubeka. “Okokuqala ebesikubhekile i-semi-final futhi sifikile lapho. Sinempi enzima kusasa, kodwa iningi injabulo. Kuzoba isipiliyoni sokuqala se-semi-final kubadlali abaningi. Kufana nokuya kwisivivinyo esikhulu, uma usifundele, asikho isidingo sokuthi ube nencindezi.”
Ukapteni, onama-wicket amaningi emqhudelwaneni, angu-15 kuma-innings ayisithupha, ukholwa ukuthi abaphosayo bazosukuma, njengoba befundile kumdlalo wabo wokugcina e-Bristol.
“Umdlalo wokugcina lapha awumnandanga kubadlali abaphosayo, kodwa ngifike kulendebe yomhlaba ngikholwa ukuthi nginabadlali abavula ukuhlasela abahamba phambili emhlabeni futhi manje ngikholwa ukuthi nginabaphosayo abahamba phambili emhlabeni. Ngiyakujabulela ukubona ukuthi bazokwenzani lapha kusasa, sinezinhlelo zethu futhi ngiyabonga ukuthi sidlale lapha ngaphambilini ukuze sishintshe esakwenza kabi kamuva.”
“Sifuna ukusebenzisa lendawo njengesikhangiso somdlalo wabesifazane ekhaya futhi sishiye umlando walabo abazosilandela futhi babenesiqiniseko ukuthi bazi ukuthi lokhu kungenzeka. Konke kuqala kusasa futhi ngijabulile ukubona ukuthi singenzani futhi sisize ngokwenza i-South Africa iziqhenye kakhulu ngosuku olubalulekile njenge-Mandela Day.”
i-semi-final ngoLwesibili izovezwa ku-SuperSport 6 kusukela ngo-11:15. Imiphumela izovezwa ezindaweni zokuxhumana ze-Cricket South Africa; uFacebook (www.facebook.com/cricketsouthafrica) and no-Twitter (www.twitter.com/officialcsa).
u-Luus ubheka okuhle ngaphambi kwe-semi-final yamaProteas esifazane Australia iqhubeka nokungahlulwa ibhekene ne-South Africa AmaProteas abesifazana alungele umdlalo ne-Australia uMoreeng ujabuliswa okunqotshwe amaProteas abesifazane okwamanje uVan Niekerk no-Ismail bayaqhakaza njengoba amaProteas esifazane afinyelela kuma-semi-final endebe yomhlaba AmaProteas esifazane abheke ukusondela kuma-semi endebe yomhlaba Yonke imidlalo kumele siyinqobe – uDu Preez uBeaumont no-Taylor banqobisa i-England ngokushaya Wonke umuntu usendaweni enhle ngaphambi kwe-England – uChetty Isihluku sika-Van Niekerk no-Kapp bahlanganisa ukunqoba kumaProteas esifazane AmaProteas esifazana agxile kumdlalo wabo